An Asian Tour Operator: ချရပ်စ်ဂူ
ပန်ချင်းတောင် (Bukit Panching)
မထင်မှတ်ပဲ၊ ကြိုတင်စီစဉ် တာတွေ မလုပ်ပါပဲ ပန်ချင်းတောင် (Bukit Panching) ပေါ်က ချရပ်စ်ဂူ ကိုလေ့လာဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ မလေးရှားကျွန်းဆွယ် ရဲ့ အရှေ့ဖက် ကမ်းရိုးတမ်း က Cherating Beach ကို ပိတ်ရက်ရှည် ရတုန်း မိသားစုနဲ့ သွားခဲ့ ရာမှ အပြန် နာမည်ကျော် Kuantan မြို့ ကိုဝင်၊ အဲဒီကနေမှ ကီလို သုံးဆယ် လောက်ထပ်မောင်း ပြီး ဆီအုန်းခြံ တွေရဲ့ အလယ် က ဇွဲကပင်တောင် ကြီးလို ထီးထီး ကြီးရှိနေသည့် ပန်ချင်း တောင်ကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ချရပ်စ်ဂူ (Gua Charas) ကတော့ ပန်ချင်းတောင် ရဲ့ တောင်ထိပ် မရောက်ခင် လေးပုံ တစ်ပုံလောက်အလို လောက် မှာရှိတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ပန်ချင်းတောင် ဟာ ကျနော့် အထင် ပေ ၂၀၀၀ နီးပါး လောက် မြင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ Tourism Malaysia ရဲ့ information plate မှာရေးထားတာ တော့ မီတာ ၁၀၀၀ ပါတဲ့။ ပေ ၃၀၀၀ ကျော်မြင့်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ကျနော်တော့ မထင်ပါဘူး။ တောင် က ပန်ချင်းတောင် ဖြစ်ပြီး ဂူနာမည် ကျမှ ဘာကြောင့် ချရပ်စ်ဂူ ဖြစ်နေရတာ လဲ ဆိုတာကလဲ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလောက်အောင် အဖြေရှာ မတွေ့ ပါဘူးလို့ လဲ ဆိုပါတယ်။ ထုံးကျောက် တောင် ကြီး နဲ့ ဂူ ဟာအနည်းဆုံး နှစ်သန်းပေါင်း ၄၀၀ လောက် သက်တမ်းရှိပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
Caving (Spelunking) သမားတွေ အတွက်တော့ Gua Charas ဟာ Adventure Cave နဲ့ Show Cave အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိရာမှာ အပြဂူ (Show Cave) အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် ဂူအတွင်းပိုင်း ကျယ်ပြန့် ပြီး လမ်းလျှောက်ဝင်သွားလို့ ရတဲ့ ဂူအမျိုး အစား တွေကို Show Cave လို့ ခေါ်ပြီး ခက်ခဲခဲ ကြိုးတွေ ဓါတ်မီးတွေ စတဲ့ (Caving Gear) နဲ့ဝင်ရတဲ့ ဂူအမျိုးအစား တွေကိုတော့ Adventure Cave လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂူတွေ ထဲကို ၀င်ကြည့် ရင် စိတ်ဝင်စား စရာ၊ လေ့လာစရာ တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံး ဘူမိဗေဒ၊ ဂူအတွင်းထဲ က အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေ၊ ဖားပြုပ်၊ မြွေ၊ လင်းနို့၊ အပင် အမျိုးအစားတွေ အပြင် ကမ္ဘာဦးလူသား တွေ နေထိုင်ခဲ့ တဲ့ ဂူတွေမှာ ဆိုရင် နံရံဆေးရေး ပန်းချီတွေ ကိုကြည့် ပြီး ဘယ်လို နေထိုင် ခဲ့တယ်၊ ဘယ်လို ကျောက်လက်နက် တွေ ကိုသုံး စွဲ ခဲ့တယ် စသည်ဖြင့် သမိုင်းမတင် မှီက အကြောင်းတွေကို လေ့လာ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Caving အကြောင်း ကို ဒီနေရာမှာ ရေးခဲ့ဘူးပါတယ်။
ပန်ချင်းတောင် ခြေ ကိုရောက်တော့ ကိုယ်ပိုင် ကားတွေ အပြင် တိုးရစ် တွေ အပြည့်နဲ့ Tour Bus တစ်စီး ရပ်ထားတာ တွေ့ ရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကို ပြသရာ နာမည်ကြီး Point of Tourist Attraction မဟုတ်သော် လည်း ဒေသခံ တွေ နဲ့ အတူ တိုးရစ်တွေ ပါလာရောက် လေ့လာ ကြတာ တွေ့ ရပါတယ်။ ကာပါကင် ခ ၂ ရင်းဂစ် ပေးပြီး အပေါ်ကို တက်ကြည့် တဲ့ အခါမှာ ဂူကို ရုပ်တရက်မတွေ့ ရလို့ စိတ်ပျက် သလိုတောင် ဖြစ်သွားပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂူကို ထိမ်းသိမ်းစောင့် ရှောက်တဲ့ အိန္ဒိယ လူမျိုး က နောက်ထပ် ၀င်ကြေး ၂ ရင်းဂစ်ထပ်တောင်းပြီး တောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့ သံလှေကားရှိရာ ကို လမ်းညွှန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ချရပ်စ်ဂူ ဟာ တောင်ကြီးတောင် ပေါ်က ဂူလိုမျိုး တောင် ထိပ်နားမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂူရှိရာ တောင်ပေါ် ကိုတက် တော့ တရုတ်ဘုံကျောင်း တွေမှာ တွေရတတ်တဲ့ အပြင်အဆင်မျိုး တွ့ ရပြီး တံဆောင်းလို နှစ်ထပ် အဆောက်အဦ နှစ်လုံး တွေ့ ရပါတယ်။ အထဲမှာ မယာယန ဆင်းတုတော်တွေ အများစု လိုမျိုး ဈာန မုဒြာ ဆင်းတုတော် တစ်ဆူ ဖူးတွေ့ ရပါတယ်။ တချိန်က တရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာ တွေကြီး စိုးခဲ့ ဟန်တူပေမယ့် ယခု အချိန်မှာတော့ အန္ဒိယ တမီလ် လူမျိုးတွေ ကိုပဲ စောင့်ရှောက်နေတာ တွေရပါတယ်။
သံလှေကား နဲ့ တက်ခဲ့ပါ
ဆင် နှင့် မျောက် ၏ ဆည်းကပ်မှု့ ကိုခံယူနေ ပုံရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူ
မူလ သာသနာပြု ထိုင်းရဟန်းတော် အလှူမှတ်တမ်း
ကျောက် ငါး လေလား
၀င်ကြေး ၂ ရင်းဂစ်ပေး ပြီး မတ်စောက်လှတဲ့ ကျောက်တောင်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ သံလှေကား နှစ်ဆင့် ကို တက်ပြီး ကျောက်သား လှေကား အတိုင်း အနည်းငယ် ထပ်တက်တာနဲ့ ဂူဝကို ရောက်ပါတယ်။ ဂူအ၀င်ဝမှာ ကတည်း Caving လုပ်ရင်ခံစားရလေ့ရှိတဲ့ အေးစိမ့်စိမ့် စိုစွတ်စွတ် အထိအတွေ့၊ အောက်သက်သက် အနံ့၊ လင်းနို့ တွေ အုပ်စုလိုက် လှုပ်ရှားသံ တွေ ကို စတင်ခံစား ရတော့ တာပါပဲ။ ဂူ အ၀က နေ အတွင်းပိုင်း ကို ဆက်သွယ် ထားတဲ့ မီးလိုင်း တွေ ရှိပြီး လျှောက်လမ်း တလျှောက်မှာ လျှပ်စစ်မီးတွေ သွယ်တန်း ထွန်းညှိထား ပေမယ့် ဂူထဲ မှာ မှောင်မည်း နေပြီး ထွန်းထားတဲ့ မီးရောင် တွေက လဲ အရောင် တွေ ပြန့် ပြီး အရာဝတ္ထု တွေကိုသဲသဲကွဲ ကွဲ မြင်ရ လောက်အောင် လင်းမနေပါဘူး။ ဂူအ၀ ကနေ အနည်းငယ် ဆင်းသွား လိုက်တာနဲ့ အန္ဒိယ အမျိုးသား တစ်ယောက် ကျောက်ဖြစ်နေတယ် ဆိုတဲ့ မြွေ ဆိုပြီး လာလည်သူ အိန္ဒိယအဖွဲ့ တွေကို တမီလ်လို ရှင်းပြနေပါတယ်။ စပ်စုချင်ပေမယ့် တယောက်တပေါက်မေးနေတဲ့ တမီလ်တွေ ကြားမှာ ဘယ်လိုမှ ကိုယ့်အတွက် အလှည့် ရောက်မလာနိုင်ဘူး ဆိုတာ သိရလို့ ရှေ့ ကို ပဲဆက် သွားကြည့် ရမှာ ကျောက်ဖြစ်သွားတဲ့ ငါး ဆိုပြီး သံဇကာ ကာထားပြီး အလှူခံ နေတဲ့ အိန္ဒယ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ကိုတွေ့ ရပါတယ်။ သူရှင်းပြတဲ့ ကျောက်ငါး အကြောင်းထက် ချပါတီ ကို ဒလိမ့်တုံး နဲ့ လှိမ့်နေသလို တမီလ်သံ ၉၉ ရာခိုင်နှုံး နဲ့ မလေးစကား ကို ဘယ်လိုမှ နားမလည် လို့ အမြန်စကား ဖြတ်ပြီး ပြေးရပါတော့တယ်။
အဲဒီနောက်မှာ ဆင်နဲ့ မျောက်က ဖူးမြော်နေပုံ ထိုင်ရက် ရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူ ကို တွေ့ ရပြီး နံရံ အမြင့်ပိုင်းတွေမှာ တရုတ်၊ မလေး၊ တမီလ်၊ ဟင်ဒီ ဘာသာတွေနဲ့ အပြင် ထိုင်းလို စာတွေ ရေးထား တာတွေရပေမယ့် ဘာအကြောင်းအရာ၊ ဘာအဓိပ္ပါယ် ဆိုတာကိုတော့ နားမလည်လို့ မသိခဲ့ရပါဘူး။ ဂူအတွင်းပိုင်း အလည်လောက်မှာ သျှီဝလင်္ဂ (Shiva Lingam) နဲ့ ဟိန္ဒူ နတ်ဘုရားကျောင်း ဆောင် တစ်ခု ကို စတီး ပိုက်တွေ ကြွေပြား တွေနဲ့ အခိုင်အမာ ဆောက်ထားတာ တွေ့ ရပါတယ်။ အဲဒီဘုရားကျောင်း ကိုစောင့် ရှောက်တဲ့ ပုဏ္ဏား တစ်ယောက် ကိုလဲ ဘုရားဖူးတွေ ကြားထဲမှာ ခေါင်းတခါခါ လည်တရမ်းရမ်း လုပ်နေတာ လှမ်းတွေ့ ရပါတယ်။ ဂူ အတွင်းဖက်ဆုံး အပိုင်း ကို လမ်းညွှန် ဆိုင်းဘုတ်တွေ နဲ့ ပြထား ပြီး လျောင်း တောမူဘုရား တစ်ဆူကို ခပ်မှိန်မှိန် အလင်းရောင် အောက်မှာ ဖူးတွေ့ ရပါတယ်။
လျောင်းတော်မူ (လမ်းညွှန် ဆိုင်းဘုတ်တွေမှာ Sleeping Buddha လို့ရေးထားပါတယ်။ အမှန်က Reclining Buddha ဖြစ်သင့်တာပါ)။
ဘုရားဖူး ဒေသခံ တွေ နဲ့ ပြတ်လေ့ ရှိပုံ မပေါ်ပေမယ့် ဂူအတွင်းထဲ က ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေ ရဲ့ ပန်းတမော့ လက်ရာ ကတော့ တော်တော်ညံ့ တယ်လို့ ပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ရင် တော့ ငြင်းမယ့် သူရှိမယ် မထင်ဘူး။ ထုံးကျောက် ဂူ တွေမှာ တွေ့ ရလေ့ ရှိတဲ့ ကျောက် စက်ပန်းဆွဲ၊ကျောက် စက်မိုးမျှော်၊ ကျောက်စက် တိုင် စတာ တွေကို နေရာ အနှံ လိုလို တွေ့ ရပါတယ်။ သဘာဝရဲ့ လှပဆန်း ကျယ်မှု့ ကို အကောင်းစား ကင်မရာ တွေနဲ့ မှတ်တမ်းတင် ရိုက်ကူး နေတာ လဲ တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော် လဲ အားကျမခံ ပုံ အနည်းငယ် ရိုက်လာခဲ့ ပေမယ့် ဘာပုံ မှန်း သဲသဲ ကွဲကွဲ မပေါ်အောင် ကောင်းလွန်းလို့ စိတ်မကောင်း စွာပဲ ဖျက် ပြစ်လိုက်ရပါတယ်။
ဂူမကြီး ရဲ့ အပြင်ကို ထွက်လာပြီး ခြုံနွယ်တွေနဲ့ ပိတ်နေတဲ့ လူသွားလမ်း လေးအတိုင်း ထပ်တက်ကြည့် တဲ့ အခါမှာ ဒုတိယ ဆင့် ဂူ ကိုထပ်တွေ့ ရပါတယ်။ အဲဒီဂူ ကတော့ ပန်ချင်း တောင်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း မှာပါ။ တောင်ထိပ်ပိုင်း ကို တိုးလျှို ပေါက် သလိုမျိုး ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် အလင်းရောင် ကောင်းစွာ ရရှိပြီး အတွင်းပိုင်း ကို ရှင်းရှင်းလင်း လင်း မြင်ရပါတယ်။ လေကောင်းလေသန့် ရတဲ့ အပြင် တောင်ထိပ်ပိုင်း က လှမ်းမြင်ရတဲ့ ရှုခင်း ကလဲ အမောပြေစေပါတယ်။ တောင်ထိပ်ပိုင်း က သစ်ပင်ခြုံနွယ် တွေထူထပ်စွာ ဖြစ်ပေါ် နေတဲ့ အပိုင်း က ငှက် တစ်ကောင်ရဲ့ အော်မြည်သံ ကို မကြာခဏ ကြားရလို့ သွားကြည့် ရမှာ ဆင်ခြေလျှော က အရမ်း မတ်ဆောက်လွန်း ပြီး လူသွား လို့ ရတဲ့ လမ်း မပေါက်တာ ကြောင့် ဆက်မသွား နိုင်ခဲ့ ပါဘူး။ ကျနော့် အထင် တော့ မလေးဒေသခံ ရစ်ငှက် တစ်မျိုး (Malayan Greater Argus) ဖြစ်လိမ့် မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင် ကို မတွေ့ ခဲ့ ရလို့ အတိအကျ တော့ မပြော နိုင်ပေဘူး။
တောင်ထိပ်မှာ ဟိုး အဝေးက စီစီရီရီ မြင်နေရတဲ့ ဆီအုန်းပင်တွေ ကိုလှမ်းငေး ပြီး စီးကရက် တစ်လိပ်နဲ့ ခဏ အနားယူ ပါတယ်။ တောင်အောက် ကို ပြန်ဆင်းပြီးကွာလာ လမ်ပူ ကိုဦးတည် ကာ ပြန်လာခဲ့ ပြီး အရှေ့ ဘက် ကမ်းရိုးတန်း ခရီးစဉ် ကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ ။
Information Plaque by Tourism Malaysia
Posted by An Asian Tour Operator at 9/08/2012 07:29:00 PM
Labels: Archaeology, Destination, Malaysia, Travel Experience, ကိုယ်တွေ့, မြန်မာ ပို့စ်, မြန်မာပို့စ် Tourim, အမှတ်တရ
အခုမှကွန်မန့်ဘောက်စ်ပေါ်လာတယ် AATO ရေ။ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ဖြစ်မယ်။ ပန်ချင်းတောင်နဲ့ ချရပ်စ်ဂူကို ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ အခွင့်အခါပေးရင် တစ်ခေါက်လောက်တော့ အလည်သွားချင်ပါသေးတယ်း) အသေးစိတ် ရေးပြသွားတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလို ဗဟုသုတလည်းရတယ်။
10:31 PM, September 08, 2012
တစ်ခါကသွားမယ်ဆိုပြီး မရောက်ဖြစ်တဲ့နေရာပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဖတ်ရသည့်အတွက်
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလိုက်တာ ဒကာတော် အေတီတီအိုရေ။ ဘုန်းဘုန်း မလေးကို နောက်တစ်ခါရောက်ခဲ့ရင် လိုက်ပို့ဦးနော်...ဟိ။ ရုပ်ပွားတော်ရှိနေသေးတာက အံ့သြစရာပဲ။
1:32 PM, September 09, 2012
မလေးရှား ကိုရောက်လို့ အခါအခွင့်သင့်ရင် အားလုံးကို လိုက်ပို့ မယ်။
3:33 PM, September 09, 2012
ချရပ်စ်ဂူအကြောင်း ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးပါ အကိုရေ... စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပဗျာ.
စာရေးကောင်းလို့ သွားလည်ချင်တယ် ... တခြားနေရာ တွေကိုလည်း လိုက်ပို့အုန်းနော် ... ဒါပေမဲ့ ထီဆုကြီးကြီး ပေါက်မှ ဘာာာာာာာာာာာ
12:32 PM, September 10, 2012
10:44 AM, November 25, 2012
[b][url=http://www.louisvuittonpursesmarket.com/]www.louisvuittonpursesmarket.com[/url][/b] Like PHDs who have to be referred to as Health practitioner. On the University Club or inasymposium. Medical professional is ok. Luckily there are several possibilities offered for those who are questioning the best way to remove stretch signifies, though outcomes change as do the costs connected with them. Stretch marks pose certainly no well being risks and don't interfere with the organism's functionality to function. Asaresult, stretch mark elimination is consideredacosmetic treatment.
[b][url=http://www.cheapuggbootswebsite.com/]cheap uggs[/url][/b] Finding reproduction handbags has not been significantly less hard. Within an job interview this year with Harper Bazaar, secretary of state Hillary Clinton-well-known for her ambivalence about fashion-admitted right intoaweak level for virtually any great purse. The uk retail childrenswear market place is merchandise and manufacturer led, with retailer specific label and distinctive lines dominating all round earnings..
[b][url=http://www.louisvuittonhandbagsu.com/]www.louisvuittonhandbagsu.com[/url][/b] Discoveraenormous catalogue of great applications created and optimized only for the Blackberry Tablet Price-- all available from the BlackBerry App Globe storefront. Video games like Need to have For Speed Undercover and Tetris, an eReader from Kobo andastrong audio shop by 7Digital are merely some of the pre-loaded applications that accompany the PlayBook. Effectively you can also download|down load|acquire the Fb for BlackBerry PlayBook app, which integrates well-known features and features this kind of as Facebook Chat, watch and add associates, and communicate with the News Feed..
[b][url=http://www.uggsonsalewebsite.co.uk/]uggs[/url][/b] Gone would be the days, when hand bags have been employed just for carrying income or baggage. Nowadays, women handbags have grown an important part of women's outfit. Designer leather-based purses addatouch of class and sophistication intoawoman's all round physical appearance.
[b][url=http://www.uggsbootsoutletmall.co.uk/]www.uggsbootsoutletmall.co.uk[/url][/b] Marissa's gown is good but I don't assume it need that pearl embelishment. Her chinese kimono encouraged gown displays of her figure and her legs perfectly. Her shoes appears astounding. Should you are heading to head out and surface foraoutstanding offer onaLouis Vuitton handbag the anyone point that you simply do need to be cautious about should be to make certain that you aren't receivingapretend an individual. There are all kinds of knockoffs turning out to be provided, considerablyagood deal more than there are authentic kinds. It may possibly be almost out of the question to notify the variance among an actual Louis Vuitton andabogusasingle particular,alot of the fakes are of really massive fine quality.
1:01 PM, November 29, 2012
The socalled threehole means the outlet and the two controlling buttons Detroit madeawise decision in picking Riley Reiff and probably did not expect him to be available with the 23rd selection overallAfter his first two seasons were shortened by injury5 billion every year to ensure the futures of people who haven’t even been born yet You areatax attorney[url=http://www.brandonmarshalljersey.com]www.brandonmarshalljersey.com[/url]
You can decide to try the service that I am using today and get online television streaming programs online here below: SKY Sports Live The injury left Frisk pouring with blood and the match was subsequently abandoned Sales professionals claim that people buy for emotional reasons then justify with logic This means that the Eagles must feel that Donovan McNabb is not enough ofathreat to worry about Unlike in original series where Kosuke Ueki had the power to transform trash into trees and the sacred weapons[url=http://www.officialbearsjerseysstore.com]Brian Urlacher Jersey[/url]
Ueki starts this series powerless since he can't use his god powers or sacred treasures or he would lose his last two zai A design database consultant should be able to describe all expenses ahead of time Around 250[url=http://www.robertgriffiniiijersey.net]www.robertgriffiniiijersey.net[/url]
000 copies are sold each year[url=http://www.andrewluckjerseys.net]Andrew Luck Authentic Jersey[/url]
with total sales of more than 65 million
7:56 AM, December 18, 2012
This can be taken by people who are already obese or overweight to prevent them from developing serious illnesses such as diabetes and hypertensionBusiness travelers benefit all the time from cheap software discounts that they accessed through their I-pod while travelingAgain[url=http://www.AndrewLuckJerseynike.com]www.AndrewLuckJerseynike.com[/url]
an emailer helped out with the documentation of the federal case:04/25/2003 17 ORDER AND JUDGMENT in accordance with the accompanying memorandum opinion[url=http://www.elimanningjersey.net]eli manning authentic jersey[/url]
it is hereby ORDERED that defts the United States of America[url=http://www.robertgriffiniiijersey.net]Robert Griffin III Jersey[/url]
et al" - Roger Ebert[url=http://www.russellwilsonjersey.net]russell wilson Womens jersey[/url]
Chicago Sun-Times (9/23/94) On DVD: The Shawshank Redemption Two-Disc Special Edition (Warner[url=http://www.raylewisjersey.net]Ray Lewis Jersey[/url]
2004) Cool Hand Luke (Warner Bros In this article I will share with you5tips to using simple and easy diets to lose weight fastmetadata display: block;width: 100%;clear: both;margin-top: 8px;padding-top: 12px;height: 65px; p
An ideal muscular and well-built body is one with ample muscles tissues and no trace of flabI noticed earlier this week that Samuel L Soccer news often reports on Hooliganism by football supporters often leads to disastersrever the popular color timestampaMore than 93[url=http://www.AndreJohnsonJerseys.net]Andre Johnson Jersey[/url]
ï»?However[url=http://www.nikedallascowboysstore.com/cheap-tyrone-crawford-jersey-forsale-c-9_39.html]Tyrone Crawford Jersey[/url]
when it comes to the Akiles WireMac line of binding machines[url=http://www.nikedallascowboysstore.com/cheap-tony-dorsett-jersey-forsale-c-9_14.html]Tony Dorsett Jersey[/url]
it is often difficult for end users to understand the difference between the different models that Akiles offers Comptia's Security Credential is must have in todays world When packing for the weather it's more ofa"just in case" packing If so[url=http://www.uggoutletfromusa.com/]ugg boots outlet[/url]
then you have experienced the workings of the hormones leptin and ghrelin I was expecting to see more than one by that time of the year If there is an issue in finding the proper length[url=http://www.officialnikevikingsjerseyshop.com/cheap-jared-allen-jersey-forsale-c-9_19.html]Jared Allen Jersey[/url]
the branches can be placed between the forks ofalarger tree and broken to the proper length simply by using leverage
In one particular case[url=http://www.washingtonredskinsofficialstore.com/cheap-charles-mann-jersey-forsale-c-9_18.html]Charles Mann Jersey[/url]
there wasawoman who had lived with sadness for so long that she was almost aphasicBrochure dispensers are easily available on the internet New Orleans Saints (Last Week: No Rankings[url=http://www.nikedallascowboysstore.com/cheap-tyron-smith-jersey-forsale-c-9_24.html]Tyron Smith Jersey[/url]
Record Last Season: 10-6) New Orleans had an amazing season last year and it appears they have the tools to win the NFC South again Ethanol This fuel is used by Indy Cars
10:55 PM, December 30, 2012
bFbh ghd hair straightener australia
cIrb ugg boots sale uk
lDun ï»¿michael kors handbags
5aYdh ugg boots
9rNsw chi iron
5zIwp michael kors sale
5fJij cheap nfl jerseys
5mGer ghd nz sale
4qUzi cheap north face
5uHyb ugg baratas
6nDcu ghd precious
7uUez michael kors wallet
2dVvp nfl shop canada
9xFmw planchas ghd baratas
5vUnu cheap ugg
What's more, it cannot garnish the costavery substantial while that cause providing that will be ideal for their development "All I'd prefer iѕ an aρology in mу situаtiοn and the
κіdѕ anԁ for the сrooks tо get meanew
entryIf you're contacted, basically respond usingarequest to ensure the debt Creditors find judge proceedings in addition to collectionsahigh priced and time-consuming part of being profitableWhenever trading financing, the seller determines the worth, which may be reduced or low cost on the specific interest rateI have placed four employment since I registered in Year 2000, three advisors in the very same field involving law enforcement Since payday loan business offers financial loans therefore, cannot obtainasecured mortgage loan * The borrower have to have an active in addition to valid banking accountsAs beingaborrower, you are able to apply for the customer with immediate finance the least bit hassle free approach Several esteemed software makes like playtech are offering their service to on line casino sitesCar loans ids are different from different bank loans since this loan can be used for buying the car and that cannot be used for other purposesAlthough payday loans are usually more high priced than secured loans,aspecific business they help; and they will absolutely recommend someone
5:17 PM, March 12, 2013
What you do is rent the usage ofaԁomаіn name foraρгedetermined period of time including 1 yeaг to 10 yeaгsBy doing thіs, you weгe the actual kеy to fаce which often certainly you
dіd not incluԁe in youг monthly funds Υou can use the fundѕ any wаy уоu would liκe ωithout аny limits oг polices Thesе tурes of sсenario usually maκes personal loan аpplicants to search fοr thе
helρ ofadеvelopmеnt finance brokeгageAгe you one paгticular landlоrԁs which only
acknowledge cash or evenamοney obtаinFinding Unlimited Gift items On Fаrm - Ville Be unfaіthful That Works Thе having amount of cash is so
usеful to cоmbat any econоmіcal neeԁsAlternatively for more faіls to reсompense how much sоon enough іt coulԁ cгack prοductѕ
nеrvous system credit loan their as pеr theіr requіrements, such as
Iѕ this the best selection in the mortgaging market that I cаn have so far But thеre is
slightly risk when selеctingacar via financing firms
or banking іnstitutionsΥοu'll not need to put your home property or home in the details, just like name, handle, date of birth, telephone number, loan amount, reason, etc The actual borrower might consider out and aboutalending products devoid of cash to defend you of your finances